Page2– News, Entertainment,
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीले छायामा पारेको छ। शनिबार संसदका दुबै सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको ‘मेरो सरकार’ शब्दमै संशोधन समेत परेको छ। छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि यसैलाई ‘इस्यु’ बनाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका २३ जना सांसदका तर्फबाट सांसद मीनेन्द्रप्रसाद
नेता बिहानदेखि रातिसम्म सय दलाल भेट्छन् : घनश्याम भुसाल
नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टी नेताले दैनिक सय दलालसँग भेट गर्ने गरेको बताएका लगाएका छन्। आइतबार काल मार्क्सको २०१ औं जन्मस्मृतिको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता भुसालले बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म नेताले दलाल भेट्ने गरेको बताएका हुन्। ‘हाम्रा नेताका दिनमा सयजना जति दलालसँग भेट हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुन व्यापारी, तस्करको पक्षमा तपाईं
बाबुरामले माओवादी त्यागेर रोजेको मधेस
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता भएको छ । पार्टी एकताका लागि गरिएको लामो प्रयास अन्ततः सफल भएको छ । विगत लामो समयदेखि पार्टी एकताबारे चर्चा भए पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै पार्टी एकताका लागि पहल भए पनि जिम्मेवारीलगायत विषयमा सहमति
नयाँ शक्ति र फोरमबीच पार्टी एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर
नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। शनिबार नयाँ शक्तिको कार्यालय बबरमहलमा नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । एकिकृत पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल राख्ने सहमती भएको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय असमानता,
विज्ञानले मानिसलाई नयाँ ज्ञान दिन्छ । ज्ञानलाई प्रविधिको रूपमा विकास गरेर नागरिकको दैनिकीसँग जोड्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगले मात्रै मानिसको जीवन सफल र समृद्ध बन्छ । हाम्रो देश विज्ञान र प्रविधि दुवै क्षेत्रमा निकै पछाडि छ । पछिल्ला वर्षमा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, तर स्वदेशी लगानीबाट विकास गरिएको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनेको छैन । बरु विदेशी प्रविधिको नक्कल गर्ने क्रम
नीतिनको नयाँ वेब सिरिज ‘बाजी’
चलचित्र ‘जोनी जेन्टलमेन’, सयौं म्युजिक भिडियो तथा ‘हाम्रो हाइस्कुल’ र रङ टाइम’ जस्ता वेब सिरिज निर्देशन गरेका नीतिन चन्दले नयाँ वेब सिरिज ‘बाजी’ तयार पारेका छन्। हालै मात्र यो सिरिजको गीत र पोस्टर सार्वजनिक भएका छन्। सार्वजनिक गीतमा स्वचित शाक्यको शब्द, संगीत तथा स्वर छ। ‘बाजी’ रोमान्टिक थ्रिलर जनरामा बनेको नेपाली वेब सिरिज हो। दुई
पछिल्लो समय युवायुवती माझ टिकटक लोकप्रिय छ। सुरुआतको समयमा म्युजिकल्लीको रूपमा सुरु भएको यो एप्लिकेसन चाइनिज कम्पनीले किनेपछि टिकटकका रूपमा हाल प्रयोगमा छ। फेसबुक, म्यासेन्जर, भाइवर, स्काइपजस्तै टिकटक पनि एउटा एप्लिकेसन हो जसमा विभिन्न खालका भिडियो तथा एक्टिङका सिन अपलोड गर्ने गरिन्छ। बच्चादेखि बूढासम्म सबैले टिकटक भिडियो बनाएर अपलोड गरेको देखिन्छ। सबैको रोजाइमा परेको छ
‘आमाको निम्ति केही क्षण मात्रै होइन उनको निम्ति एउटा दिन मात्रै होइन सकिँदैन तिरेर ऋण दश धारा दूधको नौ महिना कोखमा राखेको मात्रै होइन’ आमाको मुख हेर्ने दिनका अवसरमा बाल गायिका समृद्धि बस्यालले ‘तिम्रो ऋण कसरी तिर्नु आमा’ बोलको म्युजिक भिडियो ल्याएकी छिन्। बुढासुब्बा युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुत भिडियोमा उनको आफ्नै शब्द, संगीत र स्वर छ।
८० वर्षीया आमाको चिठी
आमाको मुख हेर्ने औंसी छोरा, शुभ आशीर्वाद ! बुहारी र नातिनातिनामा धेरैधेरै सम्झना ! पशुपतिनाथको कृपाले आरामै छौं। प्यारी बुहारी र साना दुई नातिनातिनालाई कस्तो छ ? नदेखेको धेरै भयो तर याद ताजै छ। असीम सम्झनासँगै आशीर्वाद र माया सुनाइदिनु है। म पनि तिमीहरूको मायाले आजका दिनसम्म बाँचेकै छु। छोरा, जतिसुकै व्यस्त भए पनि समय
प्रदेश १ मा विवाद, २ मा ‘मधेस र जनकपुर’
प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाले दिएको समयसीमा दलहरूले त्यत्तिकै गुजारेका छन् । नाम र राजधानीमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा गठन भएको १५ महिनापछि संसद्ले दिएको समयसीमा गुज्रिएको हो । दलहरूबीच संसद् सचिवालयले प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएको समयभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नगर्ने सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा वैशाख २२ गतेसम्म प्रस्ताव